Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Puntland oo iscasilay – STAR FM SOMALIA
Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Puntland oo iscasilay
Wasiiru dowlihii madaxtooyada ee xiriirka caalamiga ee Maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayay Puntland.
Wasiiru dowlaha oo lagu magacaao Dr Maxamed Cabaas Macalin, ayaa sheegay in warqada iscasilaadiisa uu ku wareejiyay madaxweynaha Puntland C/Welli Maxamed Cali Gaas.
Wasiiru dowlaha ayaanan sheegin sababta ku dhalisay inuu iska casilo xilka uu ka hayay Puntland, laakiin wuxuu sheegay in arimo u gaar ah oo ku qasbay inuu xilkaasi isaga tago.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii uu xilka iska casilay wasiirkii warfaafinta ee maamulka Puntland Maxamuud Soocadde.
Madaxweyne Gaas ayaa wadda qorshe uu isku shaandheyn ugu sameynayo xubnaha golaha wasiirada, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay aad looga hadal hayay isku shaandheynta wasiirada.
Wakiilkii IGAD ee Somaliya Afey oo loo magacaabay Ergayga Qaramada Midoobay ee Qaxootiga Somaliya